အဆင့်မြင့်ဟော်တယ်မှာ အဆင့်မြင့် ဂျပန်နွားကို မွေးမယ်? ဂျပန်အမဲသားဈေးကွက်က တော်တော်လေး အပြောင်းအလဲဖြစ်နေပါတယ် - JAPO Japanese News
အဆင့်မြင့်ဟော်တယ်မှာ အဆင့်မြင့် ဂျပန်နွားကို မွေးမယ်? ဂျပန်အမဲသားဈေးကွက်က တော်တော်လေး အပြောင်းအလဲဖြစ်နေပါတယ်
ဟူး 15 Jun 2022, 16:16 ညနေ
အသားနီနီကြားထဲမှာ အဆီဖြူဖြူလေးတွေပါပြီး၊ ကင်စားလိုက်ရင် ပါးစပ်ထဲအရည်ပျော်မတပ် စားကောင်းတာပါ
ဘယ်လောက်ပေးရပေးရစားမယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေများလာတော့ အရောင်းအဝယ်မမျှတာတွေ ဖြစ်လာပါတော့တယ်
ဂျပန်အမဲသား (Wagyu) ဆိုတာက ?
ဂျပန်မှာပဲရောင်းတဲ့ ဂျပန်မှာမွေးတဲ့နွားကရတဲ့အသားတိုင်းကို ဂျပန်အမဲသား (Wagyu) မခေါ်ပါဘူး
ဂျပန်အမဲသား (Wagyu) ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို ပြောပြပါမယ်
အရင်က ဂျပန်မှာ အမဲသားမစားပါဘူး
ဆာမူရိုင်းခေတ်ကုန်သွားတော့ မေးဂျိခေတ်ရောက်လာပြီး နိုင်ငံခြားကနေ အမဲသားစားတဲ့ ယဥ်ကျေးမှုဝင်ရောက်လာပါတယ်
နိုင်ငံခြားနွားမျိုးနဲ့ ဂျပန်ကနွားနဲ့ မျိုးစပ်ထားတဲ့အထဲမှာမှ အမွေးနက်မျိုး၊ အမွေးညိုမျိုး၊ ဂျိုမထွက်မျိုး၊ ဂျိုဆိုမျိုးဆိုတဲ့ Wagyu မျိုးတွေမွေးလာပြီး၊ ဒီလိုမျိုးစပ်ထားတဲ့ကောင်ကိုမှ Wagyu လို့ခေါ်တာပါ
Kobe beef, Omi beef, Sendai beef စတဲ့ brand နာမည်တွေရှိတဲ့ Wagyu တွေကိုမွေးပြီး၊ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ရွေးချယ်ပြီးမှ ဒီလိုနာမည်ကို ရလာတာပါ
brand တော်တော်များများက အရေအတွက် ကန့်သတ်ခံထားရတာကြောင့် ပြည်ပမှ ဝယ်လိုအား မြင့်တက်လာမှုကို မဖြည့်ဆည်းနိုင်
Gifu စီရင်စုရှိ Hida beefနှင့် Kagawa စီရင်စုရှိ Okura beef တို့လည်း ရှိပြီး ဂျပန်ရိုးရာအမဲသားကို အခြေခံထားသော်လည်း ဒါတွေထည့်တွက်ထားတာတောင် မလောက်တာပါ
ဒီပြဿနာက နွားခြံပိုင်ရှင်တွေတင်မကဘဲ၊ အမဲသားကို ဟင်းလုပ်ရောင်းတဲ့ စားသောက်ဆိုင်၊ ဟော်တယ်တွေပါ ဒုက္ခရောက်နေတာပါ
အဲ့ဒီမှာ ဟော်တယ်တစ်ခုက ဒီလိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်
The Okura Tokyo က Okura beef ထွက်တဲ့နွားကို မွေးမယ်ဆိုတာပါပဲ
The Okura Tokyo ဆိုတာ ဂျပန်မှာရှိတဲ့ အဆင့်မြင့်ဟော်တယ်တွေထဲက တစ်ခုပါ
1964 တိုကျိုအိုလံပစ်မတိုင်မှီ နှစ်နှစ်အလို 1962 ခုနှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်
1890 ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော Imperial Hotel နှင့် 1964 ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော Hotel New Otani တို့နှင့်အတူ ဂျပန်ထိပ်တန်းဟိုတယ်3ခုအနက်မှတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်
The Okura Tokyo စဖွင့်တဲ့အချိန် ဦးစီးစားဖိုမှူး Mr. Masakichi Ono သည် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ပြင်သစ်ဟင်းချက်လောကတွင် ဦးဆောင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ယခုအခါမှာ လူတိုင်းစားနေတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်း ပြင်သစ်ဟင်းလျာတွေကို အုတ်မြစ်ချခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်
နိုင်ငံရပ်ခြားစားဖိုမှူးများကို ဖိတ်ခေါ်ခြင်း၊ Table manner စတဲ့ အစားအသောက်ယဉ်ကျေးမှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် ပံ့ပိုးပေးခဲ့သောကြောင့်၊ အစားအသောက်နှင့်ပတ်သက်သော အထူးကောင်းမွန်သော ဇိမ်ခံဟိုတယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး “ Okura of food” ဟုခေါ်ဆိုကြတာပါ
ဒီလိုဟိုတယ်မျိုးမှာ သီးသန့် မွေးမြူထားတဲ့ ဂျပန်အမဲသား (Wagyu) က စိတ်ကူးကြည့်ရုံနဲ့ သွားရည်ကျချင်စရာပါပဲ
ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော သဘာဝတရားများနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ Shimane စီရင်စုမှာ Okura နွားများကို မွေးမြူထားပါတယ်
Shimane စီရင်စုသည် ဂျပန်အမဲသားထုတ်လုပ်မှုအတွက် ဝန်ကြီးချုပ်မှပေးတဲ့ဆုကို နှစ်ကြိမ်ရရှိခဲ့တဲ့ ဂျပန်အမဲသားထုတ်လုပ်သည့်နေရာဖြစ်ပါတယ်
အထူးသီးသန့်နေရာက နွားတွေကိုသာရွေးချယ်ပြီး 32 လအထိသာမွေးမြူပါတယ်
သာမာန် Kuroge Wagyu အမဲသားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၃ လမှ ၅ လခန့် ပိုကြာအောင် မွေးမြူထားသောကြောင့် ထုတ်လုပ်ရန် များစွာကုန်ကျသော်လည်း အရည်အသွေးမြင့် အမိုင်နိုအက်ဆစ်ကဲ့သို့သော အရသာပါဝင်မှုများ တိုးလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်
နွားမရဲ့အဆီဟာ အရည်ပျော်မှတ်နည်းပြီး အရည်ပျော်လွယ်ပါတယ်
ကြွယ်ဝသော umami ပါဝင်ပစ္စည်းများ အများအပြားပါရှိသော အဆီဟာ ပါးစပ်အတွင်း အရည်ပျော်သွားတာပါ
ဟိုတယ်ဂုဏ်ကို မြှင့်တင်ဖို့ ခမ်းနားသော ပရောဂျက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Okura အမဲသားမွေးမြူခြင်း။
အစားအသောက်အတွက် စားကောင်းဖို့ကတော့ ကတိကဝတ်ပြုနိုင်တဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံကိုလာပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးဟိုတယ်မှာ သေချာမွေးထားတဲ့ ဂျပန်အမဲသား (Wagyu)ကို မြည်းကြည့်လိုက်ပါ
‌စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၁ သောင်းခန့်လုပ်အားပေးမှနှုတ်ထွက်။ အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲ၊ တကယ်ကျင်းပဖြစ်မှာလား။
ပြေးဖို့နေရာမရှိ !!! ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ချားရဟက် ပေါ်ပေါက်လာ !!!
၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ ယခင်တစ်ခေါက်အိုလံပစ်ဟာ ဂျပန်ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်။